iyo pfungwa ye "zviwanikwa" inosiyana sei nepfungwa yekuti "zvinhu zvekugadzira"?
iyo pfungwa ye "zviwanikwa" inosiyana sei nepfungwa yekuti "zvinhu zvekugadzira"? Mupfungwa yakajairika, zviwanikwa (kubva kuFrench ressource - nzira dzebetsero) imari, hunhu, matura, mikana, masosi emari, mari. Kazhinji vanosimbisa ...
Chii ipfupi? Zvese zviri nyore. Pfupiso (kubva kuChirungu ipfupi) ipfupi yakanyorwa fomu yekuyananisa pakati peashambadzi nemushambadzi, mune izvo zvimiro zvikuru zvenguva yekushambadzira yekuratidzira zvinotsanangurwa. Tsamba pfupi (chiGerman) chimwe chinhu senge ...
Mari yakadii yakawedzera pamusoro pemakore makumi maviri apfuura? Iwe unogona kunyora muzana kana kuitsanangura zvakasiyana. Kukwira kwemitengo hachisi chinhu kana ichienzaniswa nekudzikisira. Kunzwisisa kudzikisira kuderera kwesimba rekutenga re "greenback" ...
iwo makuru maficha ehupfumi hwakasanganiswa. zvayakanakira nezvayakaipira ??? 1st yekuwedzera: Iko kusanganisa kukuru kwehupfumi hwakasanganiswa musanganiswa wemhando nhatu dzehurongwa hwehupfumi (yechinyakare, yepakati, musika) 2nd yekuwedzera: Yakavanzika pfuma mune yakadaro ...
kuita mari sei? Hakuna izwi rakadaro. Kune "kuita mari". Kutsiva mabhenefiti mune mhando nemari. mabhenefiti anotsiviwa nemari Izwi rekuti monetization rakatonyorwa muduramazwi rechiperengo. Ndakawana iyi tsananguro pane saiti http://www.newslab.ru/blog/153095: Uye sei ...
Ndine dambudziko. Haugone kunzwisisa kuti kuita amortization chii? Ndokumbirawo, kana muchigona nemienzaniso. Sekuziva kwangu, kuderera kwechinhu chinhu chakadhura mukugadzirwa, imwe chikamu chemari, ...
Upfumi. Ndokumbirawo mundibatsire kupa mienzaniso yezvisiri-zvemutengo zvinhu zvekupa uye kudiwa kwekutenda kumberi Kwete mitengo yezvinhu zvekupa uye kudiwa - izvi zvinogona kuita mabasa ekukurumidza mune zvakakomba mamiriro (rudo, rubatsiro rwevanhu), nezvimwe ...
Vangani satoshi vari mune imwe bitcoin? Yakagadzika pombi kubva ku1000 kusvika ku3000 Satoshi maminetsi gumi ega ega https://satoshinow.com/?ref=10 Iyo yakanakisa kuwana Satoshi nedzimwe mari dzecrypto, nhamba huru yemapombi https://yobit.net/?bonus=EhArY Pombi chaiyo . ...
Ndokumbirawo mundibatsire kuwana mienzaniso yedzimwe nzira dzinoshandiswa mune dzehupfumi dzidziso nzira mukati meSynthesis. Iyo inoshandiswa mukubatana pamwe nekuwongorora, kureva kutanga kwekubvaruka kwepfungwa kwechinhu chiri pasi pekudzidza muzvikamu zvacho, ...
Chii chinonzi Monopsony? Monopsony imhando yemusika mune mumwe chete mutengi wechigadzirwa, sevhisi kana zviwanikwa zviito. Kunyanya kazhinji, mamiriro ezvinhu mune iyo yakasimba ndeye monopolist mumusika, uko ...
Nyora zvinhu zvemari uye mari yebhajeti yenyika. Takaenda kuyunivhesiti, - Ndiri kunyora kubva mundangariro - Zvinoenderana neChinyorwa 49 cheBudget Code yeRussia Federation 1, mari yemutero yemubhajeti yemubatanidzwa inosanganisira: - federal ...
Chii chinonzi bhizinesi MICROSPHERE? Iyo yepasi nharaunda yebhizinesi ndiyo yemukati kana yekukurumidza mamiriro, zvinhu uye kugona kweye bhizinesi inoisa zviitiko zvaro. Izvo zvakakosha zvinhu zveMP ndezve - chimiro chesangano rebhizinesi; vanotengesa; vamiririri; vatengi; vakwikwidzi; ...
Kupiwa kwemari uye huwandu hwemari. Fomula fomula equation inotsanangura chiyero pakati pehuwandu hwemari mukutenderera uye nekumhanya kwekutenderera kwavo, kune rumwe rutivi, uye mutengo wemutengo uye huwandu hwekutengesa - ...
ndiani anoita mari pa forex? ? ichokwadi here ?? ichokwadi, kunyangwe paine zvirinani internet bhizinesi sarudzo. Nyora. Pane chaiwo - ekudzidzira maakaunzi - iwe unozodhonzwa neako kuruboshwe chitsitsinho pachiratidziro chewako - ...
ndeipi nzvimbo inogara Russia munyika maererano nemafuta uye gasi matura uye kugadzirwa? Zvinoenderana nevakuru veRussia, Russia ine pamusoro pegumi muzana% yematura emafuta epasirese, anotungamira 10nd pasi maererano ...
Chii chinonzi kuvhurwa? mhemberero yekugadzwa kwekugadzwa kwemusoro wenyika. Analog yayo pasi pechimiro chehurumende yehurumende ndiko kugadzwa. Kugadzwa irudzi rwechiratidzo chechimiro, chakagadzirirwa kusimbisa kukosha uye basa rehofisi yepamusoro yeruzhinji. ...
Ndokumbirawo unyore uye unditsanangurire fomula yekuverenga iyo mutengo wemutengi index uye iyo GDP deflator. Zvirinani mufomu yakawedzerwa, iyo Consumer Mutengo Index inoratidza shanduko mune yepakati mutengo nhanho ye "dengu" rezvinhu nemasevhisi, anowanzo kudyiwa ...
Chii chinonzi COKE MAZUVA uye chii nacho? Marasha ndee nzira yesimba, uye zvese zviri simba zvinobatsira mukutendeuka kwenyika imwe neimwe. Kunyangwe iri kuunza kana kutumira kunze .. Coke - ...
kudyidzana nekudyidzana kwenyika uye musiyano chii? Internationalization uye transnationalization matanho akakosha mukusimudzira hupfumi hwenyika. Kune tsanangudzo dzakasiyana siyana dzeizwi rekuti "kudyidzana kwenyika". Kudyidzana nedzimwe nyika inzira yekugara ichibatanidzwa mukuita kwepasirese. ...
Ndedzipi dziri mari dzinounganidzwa M1, M2, M3.Fomu yemari inounganidzwa M1, M2, M3 kubva kune iripo data. Madhipatimendi pamaaccounts aripo mubhengi mazana masere Cheki zvikamu zana nemakumi maviri Simbi mari zana mayunitsi Diki ...
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 1,256 masekondi.